Mweya Chinangwa Mashiripiti Beacon Lapel Pini yekusika, hunyanzvi, runako, rem - World of Amulets
Mweya Chinangwa Mashiripiti Beacon Lapel Pin yekusika, kugona, runako, kubvisa mabhureki uye kurudziro
87 zvinhu zvasara
uwandu Zamac + Enamel
Iyi inzira nyowani yekushanda nemashiripiti. Pini iyi inogona kushandiswa nemunhu wese. Ichakwezva chese chaunoda kungochipfeka pane inoonekwa nzvimbo yehembe dzako sejaketi, t-shati, juzi, ngowani, zvichingodaro. Iyi pini inokwevera kutarisisa kune wese munhu asi chakanyanya kukosha ichakwevera avo vanhu vaunoda pane zvaunoshuvira.
Inoshanda sei chaizvo?
Kupesana nemazango uye mhete dzinoshanda pane rako pachako simba uye mweya mweya, iwo emabhakoni mapini anoshanda kune vamwe vanhu simba. Kana vanhu vakasangana newe uye vakaona pini, pfungwa yavo inokweverwa kwairi. Panguva iyoyo simba repini rinosarudza kana munhu uyu achidikanwa kupedzisa chishuwo chako. Kana zvisiri, munhu wacho haazofambidzana newe. Kana mhinduro iri hongu, uchangobva kuwana rubatsiro rwakakura. Munhu uyu achakupa rubatsiro, ruzivo, nezvimwe ... iwe unoda panguva iyoyo kuti ufambire mberi kune chako chinangwa, chishuwo kana chishuwo. Funga nezvazvo sekudikanwa kwekutsika matombo munzira.
Pini haifi yakapesana nekuda kwemumwe munhu asi ichaita kuti iye munhu azive zvaunoda uye ake kana pano mikana yekukubatsira. Simba rinobuda kubva pini rinovhura pfungwa nemoyo zvevamwe vanhu vari mumamiriro akakwana ivo vanokubatsira.
Migumisiro yepini inenge pakarepo. Kana munhu achinge aona pini, chiito ndicho mhedzisiro.
paunowedzera kupfeka pini, zvinova nyore kuwana mhedzisiro mushure memhedzisiro. Izvo chete zvinokanganisa ndezvekuti simba repini rinogumira munguva. Kunyanya iwe kuifumura kune vamwe vanhu, nekukurumidza iyo simba rinova shoma kusimba. Mumamiriro ezvinhu akajairika simba rayo rinogara kwemwedzi mipfumbamwe kusvika pagore. Mushure meizvozvo inongova pini yakanaka isina masimba emashiripiti.
Iyo haigone kubhadhariswazve kana kuchinjiswazve
Pini dhayamita: 25mm yakagadzirwa ne zamak uye yepamusoro enamel
Pini dzese dzinobhadhariswa nemweya simba
Chinangwa mweya wakakwana wevanhu vanogadzira. Kana iwe uri musiki, ichi ndicho bheji dumwa rinogona kukubatsira. Iyo Mweya Chinangwa inogona kukubatsira iwe nezvinhu zvakawanda zvisina kuvharwa neyakaitika nzira yekusika. Chinangwa chinogona kupenya kugona kwako kuti ugone kuwana dzimwe nzira dzekushandisa matarenda ako, Chinangwa chinogona kukubatsira kubvisa mabhureki, Mweya Chinangwa inyanzvi yechokwadi pakubvisa mabhuroko anokudzosera kumashure
Icho chinoshamisa Chinangwa chinogona zvakare kukubatsira iwe kunyora zvinyorwa zvinonakidza, mavara ekutengesa kana tsanangudzo yechigadzirwa. Chinangwa chinodiwa zvikuru nevanyori vanotsvaga kukurudzirwa.
Pini yebhegi ine chinokosha kunyora nechakavanzika chakavanzika Enn kudaidza mweya Chinangwa pamwe nezvimwe zvakasarudzika zvinosunga sigil.
Tora mweya wako vavarira bheji nhasi uye rega iye akubatsire iwe kupenya zvimwe
Pini yakagadzirwa neakakurumbira jewelry muimbi Adrian Del Lago